Gianluigi Buffon: "Cristiano Ronaldo Ayaa Burburiyey Juventus, Wuxuu Dilay Fursaddii Aanu Ugu Guuleysan Lahayn Champions League" - Laacib
HomeWararka Champions LeagueGianluigi Buffon: “Cristiano Ronaldo Ayaa Burburiyey Juventus, Wuxuu Dilay Fursaddii Aanu Ugu Guuleysan Lahayn Champions League”
Gianluigi Buffon: “Cristiano Ronaldo Ayaa Burburiyey Juventus, Wuxuu Dilay Fursaddii Aanu Ugu Guuleysan Lahayn Champions League”
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa burburiyey Juventus, kana kexeeyey kooxnimadii isaga oo meesha ka saaray fursadihii ay uu naadigaasi ugu guuleysan lahaa tartanka Champions League oo ay dhawr sannadood yimaaddeen kulamada ugu dambeeya ka hor intii aanu laacibkani u wareegin.
Cristiano Ronaldo ayaa 2018 ku biiray Juventus, sannad kaddib markii ay kooxdaasi gaadhay finalka Champions League, mar dambena xataa ma aanay imanin afarta ugu dambeeya.
Gianluigi Buffon oo joogay Paris Saint-Germain markii uu Cristiano Ronaldo tegay Turin, ayaa sheegay in laacibkani uu sabab u noqday in burbur ku yimaaddo Juventus oo ay lumiso isku-duubnaantii iyo fursadihii ay guulo ka gaadhi lahaayeen.
Markii uu kusoo laabtay Juventus sannadkii 2019, waxa uu Gianluigi Buffon arkay in kooxdu ay ka duwan tahay middii uu yaqaanay ee lahayd ‘dhiigga guulaha’, ayna noqotay meel u xidhan Cristiano Ronaldo oo kaliya.
Gianluigi Buffon oo u warramay warbaahinta TUDN.com, ayaa yidhi: “Juventus waxay haysatay fursad ay ugu guuleysato Champions League sannadkii u horreeyey ee uu yimid oo ahaa sannadkii aan joogay Paris Saint-Germain, mana garan karayo waxa ku dhacay.
“Markii aan soo laabtay, laba sannadood ayaan la shaqeeyey Cristiano Ronaldo, wax fiican ayaananu samaynay, laakiin waxa aan u malaynayaa in Juventus ay lumisay DNA [Hidde-sidaha] kooxnimada.
“Waxa aanu gaadhnay finalka Champions League sannadkii 2017, sababtuna waxay ahayd in aanu ahayn koox ay ka buuxaan ciyaartooyo khibrad leh, laakiin waxa intaas oo dhan kasii mudnayd isku-duubnimada, waxaana boos walba ku tartamayay tiro ciyaartooyo aad u xooggan. Taas ayaanu luminay, sababtuna waxay ahayd Ronaldo.”
Massimiliano Allegri oo dib ugu soo laabtay Juventus xagaagii ayaa la rumaysan yahay inuu Andrea Agnelli ka codsaday inuu kooxda ka diro Cristiano Ronaldo si uu dib u habayn ugu sameeyo, una soo celiyo isku-duubnidii iyo kooxnimadii, isla markaana uu meesha uga saaro kala-qaybsanaanta qolka labbiska iyo ku tiirsanaanta Ronaldo.